नेपालको भूमिमा भारतीयको दादागिरी: सहकार्य गर्दा बर्षौ बित्यो ! ग्राभेल गर्न दिएन « News of Nepal
नेपालको भूमिमा भारतीयको दादागिरी: सहकार्य गर्दा बर्षौ बित्यो ! ग्राभेल गर्न दिएन
भारतसंग जोडिएका कञ्चनपुरका विभिन्न सीमारेखामा भारतीय पक्षकोे अवरोधले विकासका गतिविधि प्रभावित पारिदिएको छ । कञ्चनपुरको पश्चिमी सीमारेखा देखि दक्षिणी तथा पुर्वी सीमारेखामा भारतीय पक्षको दादागिरीले विकासका गतिविधि प्रभावित पारेको छ ।
सीमामा नेपालीलाई दुःख दिने गरेको गुनासोकाबीच भारतीयहरुले विकास निर्माणका कार्यमा समेत अवरोध सृजना गर्न थालेका छन् । सीमारेखामा पर्ने नेपाली भू–भागमा समेत विभिन्न बहाना झिकेर विकास निर्माणका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्न नदिएको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् ।
तर नेपाली पक्षले भने भारतीय पक्षबाट हुने ज्यादती रोक्न कुनै कदम नै चाल्न नसकेको स्थानीयहरुको भनाइ छ । यहाँ सुरक्षा सयन्त्रका प्रमुख समेत देखावटी रुपमा बोेल्ने मात्रै तर खरो रुपमा भारतीय पक्षलाई खबरदारी गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ ।
जिल्लाका विभिन्न सीमारेखामा जमीन अतिक्रमण र नेपालीमाथीको दुव्र्यवहारको गुनासोकाबीच सीमामा विकासका गतिविधिमा समेत रोक लगाएका छन् । भीमदत्त नगरपालिकाको गड्डाचौकी, जिमुवा, ब्रह्मदेव लगायतका क्षेत्रका साथै दक्षिणी क्षेत्रका विभिन्न सीमामा विकासको प्रमुख आधार सडक निर्माणमा नै भारतीय पक्षले अवरोध सृजना गरेको छ । जसले कारणले नेपाली पक्षले सडकमा ग्राभेृल तथा कालोपत्रे गर्न नै सकेका छैनन ।
बर्षौ बित्दा पनि ग्राभेल गर्न दिएन
भीमदत्त नगरपालिका–१० जिमुवा प्रहरी चौकी नजिकै सीमा स्तम्भ ८०६ (६ए) मा भारतीय पक्षले सडकमा ग्राभेल गर्न अवरोध गरेको छ । भारतीय पक्षको अवरोधले गर्दा बर्षौ बित्दा पनि गड्डाचौकीबाट जिमुवा हुँदै जाने सडकको भारतीय सीमासंग जोडिएको केही भागमा ग्राभेल तथा कालोपत्रे गर्न सकिएको छैन ।
गड्डाचौकीबाट जिमुवा हुँदै जाने उक्त सडकको भारतसंग सीमा नजोडिएको बाँकी क्षेत्रमा कालोपत्रे भइसकेको छ । तर भारतसंग सीमा जोडिएको जिमुवा प्रहरी चौकी नजिक सीमा स्तम्भ ८०६ (६ए) को झण्डै दुई सय मिटर सडकमा भने ग्राभेल पनि गर्न अवरोध गरिएको छ ।
दशगजामा भारतले कालोपत्रे गर्ने, नेपाललाई गर्न दिएन्
भारतले विभिन्न बहाना झिकेर सीमा रेखाहरुमा सडक निर्माण तथा ग्राभेल, कालोपत्रे गर्नमा नेपाली पक्षलाई अवरोध गर्दा आफुले भने सीमासम्म अर्थात दशगजा क्षेत्रसम्ममा नै सडक कालोपत्रे गरेको छ ।
पश्चिमी सीमा नाका समाप्त हुँदा अर्थात सीमा स्तम्भ नम्बर ८०५/१ (७) सम्म नै सडक ग्राभेल मात्रै होइन, कालोपत्रे समेत गरेको छ । तर नेपाली जमीनमा सीमा रेखा जिरो प्वाइन्टमा नै कालोपत्रे र ग्राभेल गर्न नपाउने भन्दै काम गर्न नै दिएको छैन ।
जिमुवा, गड्डाचौकी तथा दक्षिणी र पुर्वी सीमा रेखामा कालोपत्रे गर्न दिएको छैन । वडा कार्यालयले सीमाको सडकमा कालोपत्रे गर्ने योजना बनाएपनि भारतीय पक्षले गर्न नदिने भीमदत्त नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष प्रेमप्रकाश जैसीले बताए । भारतीय अधिकारीसंग बुझ्दा भारत सरकारको नियम अनुसार जिरो प्वाइन्टमा काम गर्न नपाइने जवाफ दिने गरेका उनले बताए ।
नेपाली भूमीमा भारतीय ‘स्ट्याण्ड’
नेपाली भूभागलाई भारतीयहरुले आफ्नो सवारी साधन राख्ने स्थानका रुपमा प्रयोग गरेका छन् । भारतीय पक्षले आफ्ना सवारी साधन रोक्नका लागि सवारी साधन स्ट्याण्ड नै नेपाली भूमीका स्थापना गरेका छन् । तर नेपाली पक्षले भारतको पछिल्लो गतिविधिको कुनै प्रतिक्रिया देखाएको छैन ।
‘नेपाली भूभागमा नै भारतीय गार्डी पार्किङ्ग स्थल बनाएर त्यहाँ गाडीहरु राखिएको छ त। नेपाली पक्षले भने यसबारे केही बोल्न सकेको छैन ।’
स्थानीय गणेश नेपालीले भने । नेपाली भूमी समाप्त रेखा अर्थात सीमा स्तम्भ ८०५÷१ (७) को नेपाली भूमीतर्फ भारतीय गाडी रोक्नका लागि प्रयोग भएको छ । त्यहाँ भारतीय नम्बरका गाडी पार्किङ्ग गरेको देखिन्छ ।
प्रचण्ड अब जंगल पनि जान सक्दैनन् – प्रधानमन्त्री ओली